Ny momba ny toetran'ny saka rehetra any an-toerana | Noti saka
Ny momba ny toetran'ny saka rehetra amin'ny faritra
Teratany be ny saka. Na dia ilay lehilahy be volo be fitiavana sy ara-tsosialy aza dia afaka miaro ireo metatra tany heveriny fa azy ireo, dia afaka miady mihitsy raha heveriny fa ilaina izany. Ity dia zavatra iray, rehefa izy irery no volom-borona ao an-trano, tsy matetika no miteraka olana, na tsy misy olana lehibe, fa rehefa entina ny saka faharoa dia lasa sarotra be ilay raharaha.
Ho mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana izahay, ho an'ny namantsika "taloha" malalako dia mpanofa trano, vahiny tsy fantatra iray izay manafika ny tranonao. Ny fanovana ny sainao dia handany fotoana sy faharetana, indraindray faharetana be. Fa maninona Mba hamaliana ity fanontaniana ity, Hotantaraiko anao daholo ny toetran'ny saka any amin'ny faritany.
1 Inona ny faritry ny tototra ary ahoana ny fizarana azy?
2 Firy ny toerana ilain'ny saka?
3 Ahoana ny fanamarihanao ny faritany?
3.1 Azo sorohina ve?
4 Ahoana no ahafahanay manampy anao hahatsapa ho mahazo aina kokoa ao an-trano?
5 Inona no hatao rehefa teratany be loatra ny saka
6 Ny fetran'ny faritry ny saka dia na semi-malalaka
7 Rahoviana ny saka no manisy marika ny faritaniny?
8 Ny fiasan'ny marika amin'ny saka
Inona ny faritry ny tototra ary ahoana ny fizarana azy?
Ny faritry ny totohondry dia faritry ny faritra natokana ho an'ny fiasa manokana, izay mety mihoatra lavitra noho ny kely indrindra, ambonin'izany rehetra izany, amin'ny taonan'ny saka na tsia na tsia. Ireto faritra ireto dia:
Faritra asa: eto ny saka dia manao ny asany andavanandro: mihinana, milalao, manala tena ... Mizara faritra samihafa ity faritra ity, ka, ohatra, misaraka amin'ny famafana ny fihinanana.
Faritra mitokana: io faritra io dia ampiasaina handaniana fotoana irery, na hatoriana na hialana amin'izay mahatonga azy amin'izany fotoana izany stress.
Faritra fanaovana herisetra: eto ny saka dia mety hiafara amin'ny fanafihana raha heveriny fa mety.
Ireo faritra telo ireo dia mifamatotra amin'ny alàlan'ny làlana, izay miforona ny volony hatramin'ny andro voalohany nivoahany. Tsy vaky mihitsy izy ireo, raha tsy mihetsika ny fianakaviana na saka hafa, mahery noho izy, manipy azy ivelan'ny faritany, zavatra mitranga eo amin'ireo olona volom-borona mipetraka eny an-dalana foana.
Firy ny toerana ilain'ny saka?
Ny saka izay tsy miala ao an-trano dia manana faritany voafaritra tsara: ny trano mihitsy; fa ireo izay mivoaka any ivelany dia "manjaka" habaka lehibe kokoa. Ity habakabaka ity dia lehibe kokoa amin'ny tranga saka lahy izay tsy misy Internet, satria izy ireo no mandeha mitady ny vavy. Ny saka tsy misy Neuter dia lavitra ihany koa (sakana 1 na 2), fa ho hitanao eo akaikin'ny loharanon-tsakafony foana izy ireo.
Raha ireo saka tsy mandeha amin'ny laoniny ireo dia kely kokoa ny habaka ilain'izy ireo. Raha ny marina dia afaka milaza aminao aho fa ny lehilahy dia tsy mirona amin'ny lalana mihoatra ny iray, ary ny vavy dia manodidina ny 400 na 500m eo ho eo.
Ahoana ny fanamarihanao ny faritany?
Manamarika ny faritaniny amin'ny fomba samihafa ny saka:
Miaraka amin'ny urine: amin'ny sehatra mitsangana.
Miaraka amin'ny ratra: fanaka, ondana sns.
Mikosoka amin'ny zavatra: izao no ilaozanao ny pheromones amin'ny tarehy.
Manana fampahalalana bebe kokoa momba an'ity lohahevitra ity ianao eto.
Azo sorohina ve?
No. Ny saka dia mila, amin'ny fahatsapany tena, hanamarika ny faritany misy azy. Ny azontsika atao dia ny manary azy alohan'ny hafanana, satria amin'izany fomba izany dia ho soratantsika tsy hanisy marika amin'ny mony ary, koa ireo fako tsy ilaina. Ilaina ihany koa ny hanomezana anao scraper (na maromaro) hahafahanao mitazona ny kitrokely ho maranitra.
Ahoana no ahafahanay manampy anao hahatsapa ho mahazo aina kokoa ao an-trano?
Ho fanampin'ny fanomezana anao ny fikarakarana fototra, misy zavatra marobe tsy maintsy ataontsika mba hialana amin'ny tsy ampoizina tsy mahafinaritra ary, indraindray, hahatonga azy hahatsapa ho mahazo aina kokoa sy faly miaraka amintsika. Rehefa dinihina fa ny faritaniny dia mizara ho faritra samihafa, ny tokony hataontsika dia apetraho miaraka ny sakafonao sy ny ranoo, fa manalavitra ilay boaty.
Ny kilalaony, ny tohiny, ary na ny fandriany aza dia tsy maintsy ao amin'ny efitrano hafa ipetrahan'ny fianakaviana. Ohatra, ny efitrano na ny efitrano fandraisam-bahiny. Amin'izany dia ho afaka "mihaza" izy, na dia artifisialy aza, amin'ny alàlan'ny fahalavorariana ny teknikan'ny mpiremby azy.
Farany, tena ilaina ny manana toerana ahafahanao miala sasatra. Ao amin'ity efitrano ity dia tokony ho afaka mangina ianao, tsy manelingelina olona.
Inona no hatao rehefa teratany be loatra ny saka
Isika izay miara-miaina amin'ny saka dia mahalala fa io ampahany "bibidia" io dia maharitra ho azy ireo foana, na dia mazava ho azy aza ary miaraka amin'ny torohevitra nomenay anao, dia afaka mifanaraka tsara amin'ny trano izy ireo ary hiara-miaina amin'ny fianakaviana. Raha manome toeram-pialofana ianao, sakafo, rano, ary fitiavana be dia be ny saka azonao.
Saingy ny fakany lalim-paka dia mahatonga azy hanana io faritany io izay mahatsapa tena ho azy ary tsy misy olona afaka manitsakitsaka. Na dia fihetsika mahazatra araka ny nohazavainay etsy ambony aza, zava-dehibe ny hitadidiana fa raha lasa saka teritery loatra izy io dia mety hitondra olana, indrindra raha manana biby fiompy bebe kokoa isika na raha mikasa ny hampiditra azy ireo ao amin'ny fianakaviantsika.
Ny fetran'ny faritry ny saka dia na semi-malalaka
Fantatry ny saka an-trano izay misy ny fetrany (ny rindrin'ny trano), fa ny saka na saka dia izay miaina anaty fahalalahana semi-liberty dia afaka manitatra ny sisin-taniny araka ny efa nomarihinay etsy ambony. Ireo anton-javatra izay tafiditra ao anatin'ny faritry ny faritry ny fihetsika dia miankina amin'ny loharanom-pahefana rehetra.
Ny saka dia honina eo akaikin'ny toerana misy azy sakafo sy rano, ary koa raha misy saka maro eo akaiky eo, indrindra amin'ireo saka izay mitady vehivavy ho vady. Raha ny mahazatra, ny saka lahy dia mazàna manana faritany lehibe kokoa noho ny vavy ary indraindray afaka mizara faritany izy ireo, nefa mazàna dia miteraka fifandonana eo amin'ny lahy tsy voadona amin'ny fotoanan'ny hafanana.
Rahoviana ny saka no manisy marika ny faritaniny?
Ny saka dia manamarika ny faritaniny ho an'ny hafa sy ho an'ny tenany. Ka ho fantatry ny hafa fa io no faritanin'izy ireo ary koa, fanekena ny tenany ihany koa. Ampiasaina indrindra ny marika hita maso sy olfactory: rangotra, fisotrony ...) Noho izany dia mila paingotra ny saka an-trano ary tsy tokony hioty manerana ny toerana ny saka lahy dia tsara kokoa izany arotsaho izy.
Ny fiasan'ny marika amin'ny saka
Ilaina ny mahafantatra ny fomba fandikana ny mariky ny saka, satria tsy voatery hifandray amin'ny faritanin'izy ireo foana izany. Indraindray ireo marika ireo dia manana tanjona hafa tokony ho fantatrao:
Taratry ny faritany, asio marika amin'ny toerana iray ny fisian'izy ireo, araka ny efa nohazavainay nandritra ilay lahatsoratra.
Marika fanairana. Mitranga izany rehefa mahatsapa ho kivy be ny saka noho ny antony sasany. Matetika atao amin'ny sac sac.
Marika famantarana na famantarana. Ny ampahany amin'ny vatanao toy ny loha na ny lamosina dia matetika kosehina mba hamela ny fofona amin'ny olona na zavatra heverinao fa tsy manana ny fofonao ary tokony hanisy marika ianao. Na dia azonao atao aza izany amin'ny fampisehoana ny fitiavanao amin'ny zavaboary hafa.
Ho fanampin'ny marika voalaza etsy ambony, ny saka dia afaka manisy marika ny faritaniny amin'ny fomba hafa: amin'ny alàlan'ny fifandraisana nentim-paharazana (auditory: meowing and purring) sy ny maso (toerana manamarika fahefana toy ny mandry eo an-damosiny mampiseho ny kibony na ny faritra ao aminy, na ny manipy aza pee vitsivitsy).
Manantena aho fa efa nahafantatra zavatra betsaka momba ny karazan-tany saka ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Ny momba ny toetran'ny saka rehetra amin'ny faritra
Rocio Martinez dia hoy izy:
Salama. Hifindra any an-tanàna hafa aho ary tiako ho fantatra ny fomba hanamboarako azy fa tsy ho very ny saka. 4 taona izy ary tsy mandeha amin'ny laoniny. Manana alika poodle roa izay iarahako milamina. Misaotra Rocçio
Valiny tamin'i Rocío Martínez
Voalohany, asio rojo misy takelaka famantarana sy microchip, raha tsy manana izany. Tsy fantatrao izay mety hitranga.
Avy eo, manoro hevitra aho ny hitazona azy ao an-trano mandritra ny 4 andro farafaharatsiny (herinandro tsara indrindra) nefa tsy mivoaka. Mandritra izany fotoana izany, dia ho fantatrao fa ity no toerana azo antoka, izay misy ny sakafonao sy ny rano ary ny fianakavianao.
Avy eo, raha hamoaka azy ianao dia avelao izy tsikelikely. Avelao izy hijery voalohany ny varavarankely mihidy, avy eo hakany izy ary ento mivoaka, ary avelao handeha irery izy amin'ny farany.
Na ahoana na ahoana, raha mankany amin'ny tanàna hafa ianao, dia tsy ampirisihina hivoaka ny saka, satria misy atahorana maro.
Raha mila torohevitra momba ny fivelarana ianao dia manasa anao hamaky Ity lahatsoratra ity.
Inona no ataoko raha mahita saka eo am-baravaran'ny tranoko aho?
Rahoviana ny saka no afaka mihinana?